အဲလစ်ကပေါလုအတ္ထုပ္ပတ္တိ: အမျိုးသမီးများနေ့မဲအနိုင်ရရှိမှုအတွက် Key ကိုလှုပ်ရှားသူ
အဘယ်ကြောင့်တူညီသောအခွင့်အရေး Equal ငြ့်အရေးဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်သူမရဲ့အဘို့အ Named ပါသလား
အဲလစ်ကပေါလု (ဇန်နဝါရီလ 11, 1885 - ဇူလိုင်လ 9, 1977) အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်မှ 19 ပြင်ဆင်ချက် (အမျိုးသမီးတစ်ဦးမဲပေးပိုင်) ၏ကျမ်းပိုဒ်အနိုင်ရတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတွန်းအားပေးခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိတစ်ဦးဦးဆောင်ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်နောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမဲပေးခွင့်လှုပ်ရှားမှု၏ပိုပြီးအစွန်းရောက်တောင်ပံနှင့်အတူဖော်ထုတ်နေသည်။
အဲလစ်ကပေါလုကို 1885 ခုနှစ်အတွက်သူမ၏မိဘများသူမကိုနှင့် Quaker အဖြစ်သူမ၏သုံးအငယ်မောင်နှမကြီးပြင်း, နယူးဂျာစီပြည်နယ်, Moorestown မွေးဖွားခဲ့သည်။
သူမ၏ဖခင်ဝီလျံအမ်ပေါလုသည်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးနှင့်သူမ၏မိခင်, Tacie Parry ပေါလုသည်ထို Quaker (သူငယ်ချင်းများ၏ Society က) လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတက်ကြွစွာ။ Tacie ပေါလုဝီလျံ Penn နှင့်ဝီလျံပေါလု၏ဆင်းသက်လာသည့်ဝင်သရော့ဖ်မိသားစုဝင်တစ်ဦးဆင်းသက်လာ, မက်ဆာချူးဆက်အတွက်အစောပိုင်းခေါင်းဆောင်များဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝီလျံသည်ပေါလုအဲလစ်တဆယ်ခြောက်နှစ်အဟောင်းတုန်းကသေပိုပြီးရှေးရိုးစွဲအထီးဆွေမျိုး, မိသားစုအတွက်ခေါင်းဆောင်မှုအားကောင်းမောင်းသန်, မိသားစုကိုပိုပြီးလစ်ဘရယ်များနှင့်ဒဏ်ခံအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူအချို့သောတင်းမာမှုများစေ၏။
အဲလစ်ကပေါလု Swarthmore ကောလိပ်, သူမ၏မိခင်အဲဒီမှာပညာတတ်ပထမဦးဆုံးအမြိုးသမီးတစျဦးအဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့သည်ခဲ့သောတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည်ပထမဦးဆုံးမှာဇီဝဗေဒအတွက် majored, ဒါပေမယ့်လူမှုရေးသိပ္ပံအတွက်အကျိုးစီးပွားတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ 1905 ခုနှစ်တွင် Swarthmore မှဘွဲ့ရပြီးနောက်တစ်နှစ်လူမှုလုပ်ငန်းခွင်၏နယူးယောက်ကျောင်းတက်ရောက်စဉ်ကပေါလုဖြစ်လျှင်, New York ကကောလိပ်အခြေချမှာအလုပျလုပျဖို့သွား၏။
အဲလစ်ပေါလုအတွက်အလုပ်လုပ်ရန် 1906 ခုနှစ်အင်္ဂလန်ကိုထွက်ခွာ အခြေချအိမ်သူအိမ်သားလှုပ်ရှားမှု နှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့ထိုအရပ်၌။
သူမသည်ဘာမင်ဂမ်တက္ကသိုလ်မှထို့နောက်တစ်ဦး Quaker ကျောင်းတွင်ပထမဦးဆုံးလေ့လာခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ Ph.D ဘွဲ့ကိုရဖို့အမေရိကမှပြန်လာသော Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် (1912) ကနေ။ သူမရဲ့စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်းအမျိုးသမီးဥပဒေရေးရာ status ကိုပေါ်ခဲ့သည်။
အင်္ဂလန်မှာတော့အဲလစ်ပေါလုကအစာငတ်ခံပါဝင်အပါအဝင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမဲပေးခွင့်ပိုမိုအစွန်းရောက်ဆန္ဒပြမှုတွေအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့သည်။ သူမသည်အမျိုးသမီးများလူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ကျောစစ်သွေးကြွများ၏ဤအဓိပ္ပာယ်ဆောင် ခဲ့. , ကျော US မှာသူမဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ဆန္ဒပြပွဲများဖွဲ့စည်းများနှင့်အကျဉ်းချသုံးကြိမ်တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
အဲလစ်ပေါလု၏ (ကွန်ဂရက်) ကအဓိကကော်မတီကုလားထိုင်ဖြစ်ခဲ့သည် အမျိုးသားအမေရိကန်အမျိုးသမီးမဲပေးခွင့်ရှိရေးအသင်းမှ အဲလစ်ပေါလုနှင့်အခြားသူများကွန်ဂရက်ဖွဲ့စည်းဖို့ NAWSA ကနေနုတ်ထွက် (1913) မှာတစ်နှစ်အကြာတွင်သူမ၏လယ်ပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အတွက်တစ်နှစ်အတွင်း (NAWSA), ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးမဲပေးခွင့်ရှိရေးပြည်ထောင်စု။
ဒါကအဖွဲ့အစည်းက 1917 ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးရဲ့ပါတီသို့ပြောင်းလဲနှင့်အဲလစ်ပေါလုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကဤအဖှဲ့အစညျး၏တည်ထောင်နှင့်အနာဂတ်ဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
NAWSA နှိုင်းယှဉ် NWP
အဲလစ်ပေါလုနှင့်အမျိုးသားအမျိုးသမီးရဲ့ပါတီမဲပေးပိုင်များအတွက်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အနေအထားကဦးဆောင်သည့် NAWSA များ၏အနေအထားနှင့်အတူအလေးသာမှာ Carrie ချပ်မန်း Catt ဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာပြည်နယ်-by-ပြည်နယ်အလုပ်လုပ်အဖြစ်ခဲ့သော။
NWP နှင့် NAWSA Synergy
အမျိုးသားအမျိုးသမီးရဲ့ပါတီနှင့်အမျိုးသားအမေရိကန်အမျိုးသမီးမဲပေးခွင့်ရှိရေးအစည်းအရုံးအကြားမကြာခဏပြင်းထန်သော acrimony ရှိနေသော်လည်းကအုပ်စုနှစ်စု '' နည်းပရိယာယ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပြည့်စုံကြောင်း (ပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်အတွက်) ပြောဖြစ်ကောင်းတရားမျှတပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင်မဲပေးပိုင်အနိုင်ရ NAWSA ရဲ့တာကပိုတမင်အရေးယူဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာပိုပြီးနိုင်ငံရေးသမားများပျော်ရွှင်အမျိုးသမီးတွေမဲဆန္ဒရှင်စောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်အစုရှယ်ယာခဲ့ဆိုလိုသညျ။ အဆိုပါ NWP ရဲ့စစ်သွေးကြွရပ်တည်ချက်နိုင်ငံရေးကမ္ဘာ၏ရှေ့တန်းမှမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးမဲပေးပိုင်၏ပြဿနာထားရှိမည်။
ဖက်ဒရယ်ပြင်ဆင်ရေးများအတွက် 1920 အနိုင်ရပြီးနောက်ရှင်ပေါလုကာတူညီသောအခွင့်အရေး Equal ငြ့်အရေးဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက် (ခေတ်) မိတ်ဆက်နှင့်ဖြတ်သန်းနိုင်ရန်ရုန်းကန်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ တူညီသောအခွင့်အရေး Equal ငြ့်အရေးဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက် နောက်ဆုံးတော့ 1970 ခုနှစ်တွင်ကွန်ဂရက်ကအတည်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုပေးရန်ပြည်နယ်များမှစေလွှတ်ခဲ့သည်။
ရှင်ပေါလုသည်သူ၏ဒုတိယ Ph.D ဘွဲ့ကို, ဥပဒေ၌ဤအချိန်ဝင်ငွေအမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှလေ့လာခဲ့ပြီးတော့ဝါရှင်တန်ကောလိပ်မှာ 1922 ခုနှစ်တွင်ဥပဒေဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
ရှင်ပေါလုသည်လည်းများ၏ဖြစ်ပွားမှာဖျောပွ, ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်တက်ကြွစွာခဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အမြိုးသမီးမြားကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ကကူညီပေးခဲ့ဖူးလျှင် ပထမကမ္ဘာစစ် , ဒုတိယစစ်လိုအပ်သောပါပြီမဟုတ်ပေ။
အဆိုပါများအတွက်အပူစစ်တိုက်ပြီးနောက်အဲလစ်ပေါလု, နယူးဂျာစီပြည်နယ် 1977 ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွား တူညီသောအခွင့်အရေး Equal ငြ့်အရေးဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက် (ခေတ်) ကအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမြင်ကွင်း၏ရှေ့တန်းမှတစ်ကြိမ်ထက်ပိုသူမ၏ဆောင်ခဲ့လေ၏။
မေီအီးဘတ္။ တန်းတူရေးနှစ်ခု Paths: အဲလစ်ပေါလုနှင့်ခေတ် Debate အတွက် Ethel အမ် Smith က 1921-1929
Eleanor Clift ။ တည်ထောင်သူညီအစ်မနှင့်ကိုးပြင်ဆင်ရေး
Inez အိပ်ချ် Irwin ။ အဲလစ်ကပေါလု & အမျိုးသားအမျိုးသမီးရဲ့ပါတီ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်။
ခရစ္စ Lunardini ။ အဲလစ်ပေါလုနှင့်အမျိုးသားအမျိုးသမီးရဲ့ပါတီ, 1910-1928: တူညီသောအခွင့်အရေး Equal ခငြ့်အရေးမှတူညီသောအခွင့်အရေး Equal မဲပေးခွင့်ရှိရေးမှသည်။
တစ်ဦးကအနည်းငယ်နာမည်ကြီးမိခင်များ - နှင့် "မိခင်များ"
Cicely တိုင်ဆန် Quotes
မာရိသညျ Daly Quotes
Susan B. Anthony အကြောင်း 15 အံ့သြစရာအချက်အလက်
Jeanne d'Albret - Navarre ၏ Jeanne
အဆိုပါ preposition '' မသန်စွမ်း '' ကိုသုံးပါရန်ကိုဘယ်လို
သင်ကြားရေးအင်္ဂလိပ်ကိုလမျးညှနျ - ESL သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစီမံကိန်း
စပိန်အတွက် '' Nadie '' အသုံးပြုခြင်း
သင်ကဥပဒေကျောင်းများအတွက် Laptop ကိုဝယ်ပါခင်မှာ
တစ်ဦးဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်မှတ်တမ်းအတွက်ပြောက်အရောင်တင်ဆီ Specify လုပ်နည်း
Denison တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အာသာ Miller ကယ့် '' တဲ့အရောင်းစာရေး၏မရဏ '' ကနေနာမည်ကြီး Quotes
ဒစ်ဂျစ်တယ်စန္ဒယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း | Korg SP250
နေ့စဉ်အဘိဓါန် Mandarin- သင်ခန်းစာ: "ရတဲ့အခါ" တရုတ်မှာရှိတဲ့
သတ္တုက Character အဓိပ္ပာယ်
Pro ကို-ဘဝ vs. Pro ကို-ရွေးချယ်မှု
Styracosaurus အကြောင်း 10 အချက်အလက်
ကျွမ်းဘား Nadia Comaneci ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအော့တို Skorzeny
Plantation နေအိမ်အကြောင်းထိပ်တန်း 15 စာအုပ်များ
Gurbani ပုံဥပမာ Gurmukhi နံပါတ်များ
သောမတ်စ် Bulfinch အားဖြင့် Apollo နှင့်ဒယ်ဖနီ,
က Superman ၏ 23 အကြီးမြတ်ဆုံးအော်စကာခဏ
ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ Homeschooling7သိကောင်းစရာများ